Rano (1,5-dimethylhexyl) ammonium poids (5984-59-8) - Phcoker
SKU: 5984-59-8 Sokajy: Weight Loss
Rohibe (1,5-dimethylhexyl) ammonium poids (5984-59-8) video
Rojo (1,5-dimethylhexyl) ammonium poids (5984-59-8) Specifications
Product Name Rojo (1,5-dimethylhexyl) chloride ammonium poids
Anarana simika Rojo (1,5-dimethylhexyl) chloride ammonium poids; 2-heptanamine, 6-methyl-, hydrochloride (1: 1)
Brand Name Rojo (1,5-dimethylhexyl) chloride ammonium poids
molekiolan'ny Formula C8H20ClN
molekiolan'ny Wvalo 165.7041
Tavy 229.3 ° C amin'ny 760 mmHg
Ny antsasaky ny biolojia Mijanona maharitra ao anaty rano (andro vetivety 2)
Solubility iSoluble amin'ny am-ponja am-pilaminana, hydrazine, somary tsy voavaha amin'ny acetone Tsy voapoizina amin'ny ety ety ety, ety etyleta
Application dia nampiasaina ho fanafody fanodinana metaly amin'ny fikarakarana ny alkalose metabolika mahery, amin'ny fitsaboana asidra am-bava mba hanamarihana ny asidôla raboka amin'ny renial, hihazona ny urine amin'ny asidra pH amin'ny fitsaboana aretina sasany.
Raw (1,5-dimethylhexyl) chloride ammonium (5984-59-8) Description
Ny chloride ammonium powdy (1,5-dimethylhexyl) dia singa tsy misy fikambanana miaraka amin'ny formula NH4Cl ary sira kristaly fotsy izay tena tsy marefo amin'ny rano. Ny vahaolana amin'ny klôronon-ammonium dia marefo. Sal ammoniac dia anaran'ny endrika voajanahary voajanahary, mineralogical ny chloride ammonium. Ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany dia miorina amin'ny fandefasana ny fitrandrahana arintany amin'ny alàlan'ny fandefasana ireo gaza azo avy amin'ny fitrandrahana arintany. Hita koa fa misy karazana vulkanina sasany. Amin'ny ankapobeny dia ampiasaina izy io toy ny mpanafana sy mpanafana entana amin'ny karazana volom-borona. Izany no vokatra avy amin'ny fihetseham-po amin'ny asidra saline sy amoniaka.
(1,5-dimethylhexyl) am-polyo-chloride (5984-59-8)
Ny anesthesie eo an-toerana dia novolavolain'ny fampiasana tropikaly ny vahaolana amin'ny hydrochloride na ny fototra fototry ny 2-Amino-6-methylheptane amin'ny maso bitro. Ny fihanaky ny alika amin'ny alika pentobarbital dia marefo ny 2-Amino-6-methylheptane hydrochloride mampiseho 1 / 500-1 / 1000 ny asan'ny tsindry hafanain'ny epinephrine. Ny hydrochloride 2-Amino-6-methylheptane dia hita fa miteraka fihenam-bolana sy fihenan'ny fiotazana. Tsy dia misy vokany amin'ny tsinay kely ny tsiranoka 0.5-1.0-methylheptane, raha oharina amin'ny alika pentobarbital, ny doses amin'ny 2 ka hatramin'ny 6 mg. Tsy misy vokatra azo tsapain-tanana eo amin'ny tsina kely, ny voka-dratsin'ny bakteria urine, ny tsiranoka marary na ny fanafody. Amin'ny ankapobeny, ny hydrochloride 2-Amino-6-methylheptane dia hita fa saika tsy misy rafitra saro-tahiry fototra izay mamporisika ny hetsika tsy misy poizina. Tsy misy porofo ara-tantara momba ny fahasosorana amin'ny moka ho an'ny tracheo-bronchial dia voamarika ao anaty bitro na raty izay ahafahana mametraka fototra maimaim-poana isan'andro an'ny 2-Amino-6-methylheptane amin'ny andro 10 sy 30.
Use ny (1,5-5984-59) ammonium chloride (8-dimethylhexyl)
▪ Ny asan'ny atleta.
▪ Amin'ny faran'ny octamylamine ao amin'ny pharmaceutique
▪ Ny rafitra ny asidra mpandraharaha
Recommended (DIMAX) XMUMX-1,5-5984 Recommended (59-dimethylhexyl)
Ho an'ny fanamarihana ihany:
Tsy misy fanolorana ofisialy fanafarana dosie (1,5-dimethylhexyl) chloride ammonium, na dia mifototra amin'ny fianarana biby sy ny fitoviana amin'ny DMAA aza, dia mety ho ny 1mg / kg ny vatan'ny kongona hatramin'ny 160mg. Ny LD50 (tetika ilaina hamonoana ny antsasaky ny biby fitsapana rehetra) ny chloride ammonium (1,5-dimethylhexyl) ho an'ny totozy dia 59mg / kg. Amin'izao fotoana izao, tsara kokoa ny milefitra amin'ireo dosie mpandala ny nentim-paharazana amin'izao fotoana ary indrindra indrindra, fikarohana bebe kokoa no tokony atao alohan'ny famoahana fanafody amin'ny fanampiana. Fotoana hendry, tsara ny maka 30-60 minitra mialoha ny fampiofanana mba hanampy amin'ny fanatsarana ny endriky ny fampiofanana, raha azo atao ihany koa ny entina mandritra ny andro ho fanalefahana fanadalana.
Ny tombony amin'ny vovo-chlorida (1,5-5984-59) (8-dimethylhexyl)
• Mandeha toy ny bronchodilators (fampiroboroboana ny bronchi ho an'ny rivotra hafa)
• Fihetsiketsehana mihetsiketsika (manimba ny fantson-dra amin'ny fihenan-tsakafo ary noho izany ny fahafaha-manidina tsara kokoa).
• Nifantoka tamin'ny fifantohana sy ny tsindrim-peo mahery vaika.
Azo ampiasaina amin'ny fampiakarana ny chloride ammonium (1,5-dimethylhexyl) ny fahaiza-manaony dia ny manatsara ny haavon'ny angovo sy ny fifantohana sy ny fifantohana.
Ny vovon-tsolika ammonium (1,5-dimethylhexyl) dia mitovitovy amin'ny rafitra mitovy amin'ny solontenan'ny monoamine. Izany hoe, mety hampitombo ny isan'ny monoamine toy ny dopamine sy ny nordrenaline.
• Azo antoka fa manohana fiofanana goavana kokoa izy io ary mampihena ny RPE (tahan'ny ezaka atao ho hita).